Xaaladda magaalada Gaalkacyo iyo waxyaabaha maanta halkaasi la filaayo inay ka dhacaan – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xaaladda magaalada Gaalkacyo iyo waxyaabaha maanta halkaasi la filaayo inay ka dhacaan
Wararka saakay naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in maanta lagu wado in lakala qaado ciidankii maamulada Galmudug iyo Puntland oo maalmihii ugu dambeysay isku hor-fadhiyay galbeedka magaaladaas.
Odayaal dhaqameed iyo waxgarad kasoo kala jeeda koonfurta iyo waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa dadaal xoogan ugu jira in maanta ay gaaraan dhulka lagu muransan yahay oo ay haatan isku hor-fadhiyaan ciidanka Galmudug ee Puntland, kaas oo ku yaala galbeedka Gaalkacyo.
Sidoo kale, odayaasha iyo waxgaradkaasi ayaa sheegay inay wadaan dadaalada ay heshiis kama dambeys ah u dhex dhigi lahaayeen labada dhinac ee xiisaddu u dhaxeeyso, iyadoona dhinaca kale aysan jirin wax hadal oo kasoo baxay maamulada Galmudug iyo Puntland, kaas oo ay uga jawaabayaan baaqyadaan kasoo yeeray odayaasha dhaqanka.
Dhinaca kale, xaaladda magaalada Gaalkacyo ayaa saakay ah mid degan, waxaana maanta dib loo furay qaar ka mid ah goobihii ganacsi ee halkaasi ka jiray, inkastoo ay cabsi jirto.
Ugu dambeyntii, dadaaladda ay wadaan odayaasha iyo waxgaradka gobolka Mudug ayaa la rajeynayaa inay noqdaan mid horumar u keenta dadaaladda nabadeynta laga dhex wado maamuladda Galmudug iyo Puntland.
Si kastaba ha ahaatee, maalintii shalay ayay ahayd markii odayaashaas iyo waxgaradkaba ay soo saareen heshiis seddax qodob ka kooban, kaas oo ay labada dhinac ugu baaqeen inay dhaqan geliyaan.